Shirkad ay Telia leedahay oo ku caawisa taliska Tadzjikistan xanibaada warbaahinta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkad ay Telia leedahay oo ku caawisa taliska Tadzjikistan xanibaada warbaahinta
La daabacay tisdag 14 augusti 2012 kl 12.01
Telia Sonera shirkad ay ku leedahay Tadzjikistan ayaa xanibta shabakadaha wararka ee dalkaas, howshaas oo ay u qabato taliska wadankas. Sidaas waxaa fashilay maantay laanta warka ee Ekot.
-Tceel waxay fulisaa amarada taliska, saas darteed qayb ayey ka yahiin meel kaga dhaca xaqa ay dadka Tadzjikistan u leeyahiin warbaahin xor ah oo madax banaan, ayuu yeri Nurddin Karsjibojev oo hogaamiya u dooda Saxaafada xortaa ee dalka Tadzjkistan.
Shirkadaha xaniba bogaga internetyada waxaa kamid ah shirkada Tceel oo ay iska leedahay shirkada Iswedhen laga leeyahay ee Telia Sonera. Tceel ayaa kamid ah qorsho ay Telia Sonera rabto in ay isku baahiso wadamada la yiraahdo Euroasia. Shirkadaan ayaa Telia Sonera u soo hoysay sanadkii hore faa'idooyin dhan 9 bilyoon oo koron.
Saxaafi madax banaan oo ku sugan Tadzjikistan ayaa asaga oo fulinaya dalab kaga yemid laanta wark ee Ekot isku dayey in uu galo bogaga ugu waweyn ee wararka asaga oo adeegsanaya qadka Tceel. Wakaaladha waaweyn ee Rashiya ee wararka ayey u soortoobi weydey in uu bogooda booqdo, sidoo kale Telefishinka Vesti iyo wakaalad warareed oo mandaqadaas ka jirta ee Fergana ayey u suurtoobi weydey in uu booqdo, waxaa sidoo kale uu booqan wayey boga Youtube.
Sida ay sheegeen ururka u dooda saxaafada xortaa ee Tadzjikistan, ugu yaraan kontameeyo wargeyso internetka ah ayaa xanibnaa tan iyo bishii mars.
Lakiin faaf-reebka ayaa sii kordhay laga soo bilaabo bishii juli kadib markii dagaalo ka qarxeen buuraha Pamir ee ku yaala bariga Tadzjikistan. Tceelna agacan weyn ayey ka geystay dabinta isgaarsiinta deegaanada ku xeeran magaalada Charug oo ku taal gobalka Gorno-Badachsjan Gorno-Badachsjan. Dowladda Tadzjikistan ayaa ku micnaysay faaf-reebka warbaahinta in ay marna salka ku hayso arimo farsamo iyo in faalooyinka ay dadku ku qoraan bogaga waraka ee internetka yahiin kuwo culays iyo dhibaatadooda leh.